Taariikhda My Butros » Sida loo dhunkada in 5 Talaabooyinka Easy
Last updated: Jan. 13 2021 | 2 min akhri
Dhunkashada waa ficil Shukaansiga iyo marka si saxan loo sameeyo iyo qofka xaq u, waxay keeni kartaa in ay xabadka-u sameynaya, daanka-ka tagtey sixir. Iyada oo ay tani laga yaabaa in la maago, ma aha. By soo socda ku Hanuunin Dadka Arrinta u fududahay tallaabo-tallaabo, aad ugu dhakhsaha badan noqon doonaa sida in uu arko rashka.
Step 1: Curinta Kiss ah
Waqtiga waa wax walba. By tagtey tilmaamo khiyaano, aad uga dhunkaday kartaa adiga oo aan ka soo baxay oo wuxuu ku yidhi. Isgaarsiinta ee dhunkasho ka mid noqon kara: is kooban u qabtay eegaya taariikhda ee bushimaha, wax yar ka dillaacay bushimahaaga qudhooda, hurtid dibnaha marmar qaniinay sida aad fiirsadaan galay taariikhda indhihii, ama afkaaga kissable leh gloss dibnaha / ul cutubka iyo minty neefta cusub. Dabcan, mar aad ku jirtay aad lammaanahaaga muddo ah, calaamadaha iyo dareen kale kaa caawin doontaa in aad ogaato waqtiga saxda ah marka waa in ay iyaga dhunkado.
Step 2: Dejinta Mood ah
Cuskanaya in u dhunkasho waa xitaa sexier markii bogaadin ah la siiyo. Oo waxay ku yidhaahdeen “aad tahay si qurux / doonteen” hab u gaar ah ayaa kaa caawin kara amp ilaa dareenkuba. By yareeyo mugga iyo jawiga guud ee codkaaga sida aad xirtid indhaha sheegayaa taariikhda in aad qabto dareen qoto dheer iyaga, halka sidoo kale ay ku adkeyd in ay u guuraan dhow si aad u.
Step 3: Ka gudbidda caqabadaha dhunkashada ah
Haddii tani ay tahay dhunkasho ugu horeysay, dhunkasho ugu horeysay la Wadaage cusub, ama aad tahay wax yar oo ku saabsan dhunkashada nervous, jebinta caqabad dhunkashada ma kaa caawin doona oo keliya in ay qaboojiyaan neerfaha kuwa laakiin waxay ku tusi doonaan niyad jaceyl aad. Halkii ay ka aadi ee u dhunkashada weyn, tiirsadee ee u hab ah iyo dhunkado taariikhda ee dhabanka. Furaha Talaabadan waxaa lagu meeleyn. Samee dareenkaaga iyo ujeedooyinka cad u doorista dhunkashada dhow dhegta ama afka halka ka dhalto muddo xoogaa ilbiriqsiyo ah. Faqayaan wax flirty galay dhegahoodu halka bushimahaaga ahliga waa hab kale si ay u caawiyaan jebin ooday dhunkashada ah.
Step 4: Going in u Kiss ah
Hayso fudud dhunkashada. Hamiday fara badan oo dhunkasho ugu horeysay noqon kartaa jeedin-off. Iyadoo bushimahaaga tartiib u kala qaybsameen, ama aasaan dhunkasho toos ah ama si tartiib ah ku xirto dibnaha la taariikhda. In tallaabadan, sidoo kale waxaa muhiim ah in la raaco taariikhaha aad u horseedi. Ka taxadar sida taariikhda ka jawaabey oo guuro inta lagu jiro dhunkashada. Haddii ay ku tiirsadaan in ama wali kacsan, waxaad awoodi kartaa inaad ku soo guurto dhunkasho sii daran. Haddii aadan, afjaro dhunkashada soo jiidaya dib, furitaanka indhaha si aad u xiriirka indhaha, oo dhoola.
Step 5: Naciima Post-Kiss
Kani waa heerka toddobobax ee geedi socodka Dhunkashada ku. Haddii aad ku riyaaqay dhunkasho ayaa muujinaya lamaanahaagu burburiyaha gacanta iyo dhoola. Haddii aad doonaysid in aad dhunkashada sii, aad u hubiso in la xafido xiriir jidh ahaaneed. Waxa kale oo aad ku beddelato kartaa ilaa style Dhunkashada adiga oo u maraya xagal ee hab, xawaaraha iyo muddada dhunkasho, dhunkado adayg iyo xoojinta, iyo qaabkaaga dibinta. Haddii aad la sameeyo dhunkashada in muddo ah, si fudud taagni dhexdiisa galay indhaha qaarka kale, oo wuxuu ku raaxaysan la joogo.
Iyadoo rajeynayaa taasi waa ugu horeysay ee dhunkashooyinkiisu badan oo adiga iyo taariikhda loogu talagalay, waxaa muhiim ah in loogu abaalgudaa xaqdarro dareenka joogo. Ha Laanta ee Twinkle indhihiinna, sii dhoola, oo la siiyo in u “ayaad ula qabsatay dunida” dareen.
5 Waxyaabaha caanka ah ee anaga bari kartaa oo ku saabsan xidhiidhkooda
The 5 Guddomiyaha Ururka Dating Big in dumarka Samee
6 Talooyin ku habboon la Meherka Smarter!
7 Fikradaha Dhulku gooni ah Date A